Pazera ripi mwana paanotanga kudzidza ballet zvirinani? - Nhau - Fitdance ballet tutu fekitori.
Imba > Nhau > Nhau dzekambani > Pazera ripi mwana paanotanga kudzidza ballet zvirinani?
Vana vanogona kudzidza ballet kubva pamakore mana kusvika gumi nemashanu, mushure memakore gumi pagunwe, asi nenzira dzakakodzera dzekudzidzisa, mwana pazera rezvigunwe anogona kusimukira. Mumakambani ebhaletiki emakambani, vana vazhinji vanotanga kudzidza ballet pazera ramakore mana kana mashanu. Makore matatu kana mana gare gare, vana vakatanga kubata chigunwe, asi maitiro acho akatosiyana nenyika dzekune dzimwe nyika, chigunwe chinongova chikamu chidiki chekirasi yese, nguva isati yapera uye mushure memaminetsi gumi chete, kwete kirasi yega yega ine toetraining. Zvakare, kune vadzidzisi vanocherekedza zvakanyanya kugona kwemwana mumwe nemumwe, saka zvakachengeteka kuti vana vaende padhuze. Asi chete kana mwana aine simba rakakwana uye kugona.
Vana vari mukuvandudzwa kwedanho remuviri, saka mukudzidziswa vanofanirwa kutarisa kukura kwefupa remwana, mhasuru kukura uye zvichingodaro. Kudzidziswa kwevana vadiki hakufanirwe kuteedzerwa pamuviri wevana vadiki. Nekudaro, vana vanogona kuita chimiro chakamira, vagere zvakapusa kuchinjika maitiro. Kufanana nekukwasva igwa pasi; Ita ingot diki, yakati sandara pasi kuita diki kumedza nhunzi; Nhema pasi uye tambanudza uye tambanudza makumbo ako.
Yakawanda yakawanda yekudzidzira yekutamba inofanirwa kuitwa mumitambo yekutamba yevana kudzidzisa vana vane chaiyo yekutamba mafambiro uye nzvimbo. Kuitira kuti vana mukuita kwekutamba vafambe nenzira kwayo yekutamba. Musoro mumwe netsoka imwe zvinofanirwa kuve neakarurama uye zvisirizvo mamiriro ekuita kuti uwane chinangwa chekudzidziswa
Yapfuura:Sei vatambi ve ballet vachimira padenga?
Tevere:Zvakanakira kudzidza ballet